Mon Petit Avatar: Central Plaza Ladprao
Posted by Mon Petit Avatar at 9:31 PM
ဘန်ကောက်ကတော်တော်စည်တယ်နော်... တစ်ခေါက်လောက် အလည်လာခဲ့ဦးမယ်...။
airfryer က အရမ်းကြီး ကြီးပုံတော့ မရပါဘူး၊ နေရာကြောင့်လား? မကြာခဏ လုပ်စားမယ် ဆိုရင်တော့ တန်မှာပဲ၊ အင်း..ဒီလိုဆိုလည်း ကိုလက်စထရော အကြောင်း နည်းနည်းတွေးဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်နော်....။းD
လာခဲ့လေ မိုးငွေ့လေး စည်တာကတော့ ပြောမနေနဲ့ အပြင်မှာပူလွန်းတော့ ဆိုင်တွေမှာပဲအချိန်ကုန်ကြတထင်ပါရဲ့။
ဟုတ်ကဲ့ ကိုညီလင်းသစ် နေရာကြောင့်ပါ အိမ်မှာက ဘူးတွေပါ သိမ်းနေကြဆိုတော့ ထားစရာနေရာမရှိဘူး ဖြစ်နေတာ။ဆီမပါဘဲ လေနဲ့ကြော်တာ ဆိုပြီး ခဏခဏစားဖြစ်ရင်တော့ မလွယ် Cholesterol အတွက်လဲ စဉ်းစားနေတယ်။းD
ဘာလို့ airfryer လို့ ခေါ်တာလဲဟင်။
(အဲဒါရေးပြီးတင်လို့ ကုိုမရဘူး။ ခုတခါတင်မယ်လုပ်တော့ အထက်ကဟာကိုတွေ့ တော့ ဒါမေးထားတာအလကားဖြစ်သွားပြီ။)
အလကားမဖြစ်ပါဘူးကွယ် Iora ရဲ့ Cbox ထဲမှာကြေငြာဝင်ပေးထားသေးတယ် ဟီး။
I just went to the link you dropped at my cbox and have read it. It is amazing. I am also excited about this. But it seems expensive and I don't have enough space to put it as my kitchen is also small like yours. Thanks Mon. At least I have read it and have been excited to know about it.:DDD
Air Fryer ကို ဒီမှာလည်း အတော်လေး ကြော်ငြာနေတာ တွေ့တယ်.. ဆီနည်းနည်းနဲ့ ကြော်နိုင်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တယ်လို့ ဆိုတယ်... စလုံးဒေါ်လာ ၄၀၀ ကျော်ဆိုတော့ နည်းနည်းများသေးတယ်... ပြီးတော့ သူ့ပုံစံကတော့ လုံးလုံး လုံးလုံးနဲ့ ဆိုတော့ မျက်စိထဲ ကြည့်မလှသလို ဖြစ်နေသေးတယ်... :D :D :D